अझै उठ्न सकेन काठमाण्डाैका मुख्य मुख्य चोककाे फोहाेर – List Khabar
Home / समाचार / अझै उठ्न सकेन काठमाण्डाैका मुख्य मुख्य चोककाे फोहाेर
अझै उठ्न सकेन काठमाण्डाैका मुख्य मुख्य चोककाे फोहाेर
admin3weeks ago समाचार Leaveacomment 19 Views
काठमाण्डौ – चार दिनदेखि फोहर उठ्न थाले पनि काठमाण्डाैका मुख्य मुख्य चोककाे फोहोर अझै उठ्न सकेका छैन । काठमाण्डौ अझै पनि सफा हुन सकेको छैन । अठार दिनदेखि व्यवस्थापन हुन नसकेको फोहाेर गएकाे बुधवारदेखि उठाउन थाले पनि कलङ्की, कालीमाटी, खसीबजारलगायत सडक किनारामा फोहाेरको डङ्गुर अझै उस्तै नै छ ।
नियमित परेको पानी र हाल फोहर व्यवस्थापन गरिँदै आएको सिसडोलका स्थानीयले अवरोध गरेपछि काठमाण्डाै उपत्यकाको १८ स्थानीय तहको फोहर गएकाे साउन ३२ गतेदेखि उठ्न सकेको थिएन ।
लामो समयदेखि फोहाेर सङ्कलन भएर बसेकाले सबै एकैपटक व्यवस्थापन हुन नसकेको काठमाण्डाै महानगरपालिकाको भनाइ छ । आगामी तीन दिनभित्रमा यसअघि जम्मा भएर बसेका सबै फोहर सिसडोल लगिने कामपा वातावरण विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
अहिले साविकअनुसार नै फोहर व्यवस्थापनको काम भइरहको छ । ‘धेरै दिनको सङ्कलित फोहर एकैपटक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिला भएको हो, अहिले नियमितरुपमा फोहर उठिरहेको छ’, प्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो । अठार दिनको अवधिमा करिब १५ हजार मेट्रिक टन फोहर जम्मा भएको बताइएको छ ।
गएकाे मङ्गलबार कामपा प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको संयोजकत्वमा काठमाण्डौका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद रिजाल, सडक विभागका महानिर्देशक, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकलगायतको बैठकले फोहाेर उठाउने निर्णय गरेको थियो । मङ्गलवारको बैठकले सिसडोलसम्म जानका लागि बाटो मर्मतको काम सडक विभागले तत्काल गर्ने र सिसडोलका स्थानीय व्यक्तिका समस्याका विषय पनि समाधान गरिने भएपछि आजदेखि फोहर व्यवस्थापन हुन थालेको हो ।
कामपाले गएकाे साउन ३२ गतेदेखि नै सार्वजनिकरूपमा सूचना जारी गरेर नगरबासीलाई घर बाहिर फोहर ननिकाल्न आग्रह गरेको थियो । सो सूचना सार्वजनिक भएको १८ हप्तापछि फोहर व्यवस्थापनको काम भएको हो । सिसडोलमा विसं २०६२ मा दुई वर्षको मात्र फोहाेर व्यवस्थापन गर्न सकिने क्षमताको ल्याण्डफिल साइट निर्माण गरिएको थियो तर पटकपटक त्यसैमा माटोले पुर्दै केही विस्तार गरेर अहिलेसम्म नै फोहर व्यवस्थापन गरिँदै आइएको छ ।
हरेक दिन उपत्यकाबाट एक हजार २०० मेट्रिकटन फोहर सिसडोलमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी कामपाको मात्र पाँच सय मेट्रिक टन फोहर निस्किने गर्दछ । निजी र कामपाको गरी दैनिक कम्तीमा दुई सय गाडी फोहर सिसडोल लाने गरिएको छ ।
हाल फोहर व्यवस्थापन गरिँदै आएको सिसडोलभन्दा दुई किलोमिटर टाढा बञ्चरेडाँडामा दीर्घकालीन फोहर व्यवस्थापनस्थल निर्माण गरिएको छ । निर्माण भइरहेको दीर्घकालीन ल्याण्डफिल साइट नुवाकोट र धादिङको सिमानामा पर्छ । सोह्र वर्षदेखि नुवाकोटको सिसडोलमा उपत्यकाको १८ स्थानीय तहको फोहर विसर्जन गरिँदै आएको छ । काठमाण्डाै उपत्यकाबाट दैनिक उत्सर्जन हुने फोहाेरमध्ये करिब ७५ प्रतिशत सिसडोलमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ ।
Previous पेट बेला बेलामा गुडुङ् गुडुङ् कराउँछ ? यस्तो हुनसक्छ कारण
Next के हो त सुतेकै समयमा मृत्यु हुने खतरनाक रोग ? कसरी हुन्छ त सुतेकै समयमा मृत्यु !